Nhau - "LUXMAIN" inground simudza mafomu akateedzana emadzitateguru
Mushure memakore manomwe ekubudirira, LUXMAIN's inground lift yakazadza marongero ezere akateedzana epositi positi, mbiri post, mota dzekutengesa uye zvakagadziriswa inground lifts. LUXMAIN ndiyo yave yega inogadzira yakazara yakazara renji dzakakomberedzwa muChina.
Imwe chete post ingound lift inosimudza yekushambidza mota uye kugadzirisa Iyo yekuwachisa mota inonyanyo shandiswa yekuchenesa uye yakapusa kugadziriswa kwemotokari chassis. Iyo pallet yemotokari washer inosimudza yakashongedzwa ne grid ndiro kuti ive nechokwadi chekuzara kwezasi kwemotokari uye nekupa yakafarikana nzvimbo yekuchenesa chassis. Imwe chete post inground kusimudzira yekuchengetedza ine yakagadzirirwa maviri maviri ekuchengetedza michina senge mechiki kukiya. uye hydraulic throttle mahwendefa. Inogona kuve yakagadzirirwa H / X-mhando rutsigiro maoko kuti vashandisi vagone kupedzisa kugadzirisa kwezuva nezuva.
Iyo mbiri posvo uye yekutengesa mota akateedzana akakomberedza anosimudza anonyanya kushandiswa ekugadzirisa mota uye gungano remota uye kugadzirisa. Kune mhando dzakasiyana dzemhando, kusanganisira mbiri-post yakasanganiswa mhando, mbiri post yakakamurwa mhando, iyo zvinoenderana nezvinodiwa chaiko, dzakasiyana nzira dzekudzora senge hydraulic, mechanical kana PLC inogona kushandiswa. Iyo LUXMAIN yakaposita post yakajairwa inground simudza yakapfuura CE chitupa.
LUXMAIN inogona zvakare kugadzirisa akasiyana marudzi eengound anosimudza maererano nemamiriro ekushanda uye mamiriro eiyo geological, ayo anonyanya kukodzera kune akawandisa maindasitiri ekugadzira minda senge mota gungano, yekuvaka michina uye forklifts. Ichi chishandiso chinowanzo gamuchira mbiri posvo kana yakawanda posvo fomu, Iyo yakanyanya kusimudza huremu hwemidziyo iyo yapera yasvika matoni makumi matatu nemaviri.
LUXMAIN ichapa vatengi mamwe masisitimu ekusimudza akakomberedza zvakadzikama.
Inotakurika Hydraulic Scissor Mota Simudza, Inotakurika Imwe Post Post Mota Simudza, Kaviri Post Pasi Pasi Pasi Simudza, Imwechete Kuita Cylinder, Nhare Imwe Post Post Kusimudza Mota, Kaviri Post Inground Simudza,